बैंक नोटमा किटाणु? - BBC News नेपाली
बैंक नोटमा किटाणु?
के तपाइँलाई थाहा छ तपाइँको हातमा रहेको रुपैँयाको नोट स्वास्थ्यका लागि कति हानीकारक हुन्छ?
यी रुपैँयाहरुमा क्षयरोग, आउँ अथवा अल्सर फैलाउने जस्ता खतरनाक किटाणुहरु हुनसक्छ।
भारतमा गरिएको एक अनुसन्धानले त्यहाँका खासगरी पुरानो वा बढी प्रयोग हुने जस्तै १०, २० र सय रुपैँयाको नोटमा रोगका किटाणुहरु बढी रहेको देखाएको छ।
त्यसो भए प्रश्न उठ्छ कि पैसाको सट्टा डेबिट कार्ड अथवा क्रेडिट कार्डले सामान किन्नु ठीक हो? त भन्ने प्रश्न पनि त्यहाँ उठेको छ।
भारतको इन्स्टिच्यूट अफ जियोनोमिक्स एन्ड इन्टिग्रेटिव बायोलोजी अर्थात् (आईजीआईबी)का वैज्ञानिकहरुले त्यस्ता नोटको डिएनए परिक्षण गर्दा तिनमा खतरनाक संक्रमण फैलिने खालका विभिन्न ७८ वटा जीवाणु रहेको पत्ता लगाएका छन्।
परिक्षणमा ‘राइबोसोमल आरएनए’ नामको तरिका अपनाइएको थियो।
यसअघि यो प्रक्रियाबाट गरिएको कम्प्यूटर, साबुन र कपडाको परिक्षणमा पनि यस्तै किसिमका संकेतहरु मिलेका थिए।
आईजीआईबीका बैज्ञानिकहरुका अनुसार परिक्षणको नतिजा निकै चकित पार्ने खालको छ किनभने यसले हरेक व्यक्तिसँग सरोकार राख्छ।
पाँच सदस्यीय शोधकर्ताहरुको टोलीको नेतृत्व गर्दै 'आईजीआईबी' का वरिष्ठ वैज्ञानिक एस रामचंद्रनले बीबीसीसँग भने परिक्षणपछि ज्यादा प्रयोग हुने नोटहरुमा रहेको किटाणु हटाउन जरुरी छ। उनी भन्छन्- यो शोधका लागि नयाँ तरिका अपनाइएको थियो जसका कारण परिणाम पनि छिट्टै आएको थियो।
यसभन्दा अघि नमुनालाई प्रयोगशालामा पठाइन्थ्यो र त्यो प्रक्रियामा बढी समय लाग्ने गर्थ्यो।
उनले भने, “शोधको परिणाम चकित बनाउने खालको पक्कै पनि छ किनभने यसले सबैसँग सरोकार राख्छ। नोट एकदिनमै कति धेरै हातमा पुग्छ। यसो गर्दा एउटा मानिसबाट अर्को मानिससम्म रोगका किटाणु पुग्नेगर्छ। यसमा ती नोटहरु बढी संक्रमित छन् जो बढी प्रयोगमा आउँछन्।”
शोधको लागि दिल्लीमा रहेका बजार, ठेलागाडीमा सामान बेच्नेहरु र तरकारी पसलबाट नोटहरु संकलन गरिएको थियो।
कतिपय देशहरुमा आफ्नो बैंक नोटहरुलाई रोगको किटाणु मुक्त गर्ने व्यवस्था छ। यसको लागि विशेष मेसिनको प्रयोग गर्ने गरिन्छ।
जापानसहित कतिपय देशले समय समयमा नोटहरुमा भएको किटाणुलाई मेशिनको प्रयोग गरेर हटाउने गरि रहन्छ।
तर भारतमा यसको प्रयोग हुँदैन। तर पुराना नोटहरुलाई साट्ने व्यवस्था भने पक्कै छ।
वैज्ञानिक रामचंद्रनका अनुसार अब शोधको दायरा अरु बढाउनुपर्छ ताकि रुपैँयामा पाइने रोगका किटाँणूमा कुन चाहिँ एन्टिबायोटिक्सको असर हुँदैन भन्ने थाहा हुन्छ।